Miomàna … tsy ho mpitazam-potsiny ! (+vidéo)
Antso avo ho an’ny mpiara-mitolona no nataon’ny solombavam-bahoakan’Ambatolampy teo amin’ny Kianjan’ny Finoana androany. « Efa tsy tokony variana hamaly ny fandrangitan’ny mpanongam-panjakana intsony isika » hoy izy « fa miasa amin’ny fanomanana ny fiverenan’i Dada amin’izay ». Nazavainy fa efa tabataban’ny resy sisa ny an-dRajoelina sy ny namany satria fantany fa tsy azo iodovirana intsony ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA.
Tokony hiezaka amin’ny manadrify azy ny tsirairay mba tsy ho mpitazanam-potsiny ka hanenina amin’ny andro lehibe. Raha ny miparitaka any amin’ny fampahalalam-baovao mpomba ny fitondrana tokoa dia tsy misy hevitra ny hahafahan’ny Filoha RAVALOMANANA mody sy milatsaka. Fantatra anefa fa efa nandalo teto Madagasikara ireo iraky ny SADC izay handinika ny fomba hanatanterahana izany. Midika izany fa tsy mijanona ambony latabatra fotsiny ihany intsony ny andininy faha-20 amin’ny tondro zotra fa efa misy dingana mizotra mankany amin’ny azo tsapain-tanana.
Filoha RAVALOMANANA Marc : "ny androatokom-piainako dia hatokako ho an'ny Filazan-tsara sy ny Fireneko"
Am-panetren-tena tanteraka no nandraisan'ny Filoha RAVALOMANANA ny mbola nametrahan'Andriamanitra azy eo amin'ny toeran'ny Filoha mpanampy ao anatin'ny birao foibe FJKM. "Zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainako izany" hoy izy "ary manome toky aho fa vonona tanteraka hiatrika ny adidy aman'andraikitra miaraka amin'izany". Notsorin'ny Filoha fa sahiran-tsaina ihany ny tenany noho ny tsy nahafahany niatrika ny synoda lehibe tany Manakara saingy "hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra" hoy izy.
Nomarihiny moa fa matoa mbola tafaverina eo amin'izany toerana izany ny tenany dia mbola misy asa takian'Andriamanitra aminy. Fanintelony androany kosa ny Filoha RAVALOMANANA no niala-tsiny tamin'izay mety ho fahadisoany amin'ny maha-olombelona azy ary nangataka ny rehetra hibanjina ny hoavy ka hiady ho an'ny fampielezana ny filazan-tsara mba ho fanavotana an'i Madagasikara. Tao anatin'ny hafatra izay nampitain'ny Filoha RAVALOMANANA androany dia mbola nanentana ny rehetra ny tenany mba hampitsahatra ny fifandrafesana fa hijoro kosa ho fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra mba ho fanavaozana an'i Madagasikara. Tsy hadinony ny niarahaba ireo rehetra lany ao amin'ny birao foibe sy ny mpandini-draharaha ary nanamarika ny fahavononany hiara-miasa amin'ny kristianina rehetra ho fampandrosoana ny fitoriana amin'ny olombelona manontolo sy ny olombelona rehetra.
Ignace Randriamamizafy : « avelao ny politika ho an’ny mpanao politika» (+vidéo)
Diso miaro tena loatra ny ekipan-dRajoelina hany ka mifanipaka anaty ny iafarany. Mibahana loatra manko ny fiarovana ny « hena an-tanan-tsaka » ka tsy misy firindrana intsony na ny fitondran-tena politika na ny fanambarana atao. Fony mbola Camille Vital no tao Mahazoarivo dia efa nanizingizina ny FATE fa hanao fifidianana satria efa milamina ny tany sy ny Firenena. Rehefa mahakasika ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA anefa dia lazaina fa tsy mbola mety indray izany satria « tsy mbola milamina ny tany ».
Raha tsiahivina dia io fanambarana nataon’ny praiminisitry ny FATE io no noraisin’ny mpanelanelana nandritra ny fivoriana natao tany Gaborone sy Sandton ka nahatonga ny SADC nilaza fa mody tsy misy fepetra ny Filoha RAVALOMANANA. Izany rehetra izany dia mbola manamarina fa tsy mitondra Firenena no ataon’izy ireo fa mibodo fahefana. Ary tena manampy amin’izany ireo mpitam-basy ambony grady izay efa toy ny dinta miraikitra amin’Ambohitsorohitra mihitsy. Raha ny zavatra hita tao anatin’ny telo taona nisian’ny krizy tokoa dia manamarina fa isan’ny fototra handaminana ny Firenena ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA sy ireo sesitany poilitika rehetra. Manamora ny fifampiresahana izany ka afaka ho fanoitra amin’ny fifampihavanana izay fanafodin’ny fiverimberenan’ny krizy politika eto Madagasikara. Tokony ho tsapan’ny rehetra hatrany fa ny politika dia tokony an’ny politisiana fa tsy idiran’izay hery rehetra mieritreritra fa manan-tombo satria tsy mitovy amin’ny hafa. Ny foloalindahy rahateo dia eo ambany fibaikoan’ny sivily hatrany ary tsy mbola nifamadika mihitsy izany amin’ny tany repoblikana.
Fitokanana paompy tany Beloha Androy : mahina amin’ny ratsy ataony Reboza Julien (+vidéo)
Nahatohina an’ity solombavam-bahoaka voafidy tao beloha Androy ity ny fihetsika nataon’ny ministra FATE iray tany an-toerana. Na dia samy avy any Androy aza manko izy ireo dia nitory fifanakahalana sy fifanenjehana mahery vaika i Reboza Julien raha nitoka paompin-drano tany an-toerana. Raha ny tatitra nataon’i Longin dia nampitandrina ity ministra AVI ity sao ireharehan’ny mpanara-dia ny Filoha RAVALOMANANA ny fotodrafitrasa vao notokanany. Namafisiny manko fa i tgv no nahavitana izany fanitarana ny famatsian-drano tao beloha.
Notsorin’ny solombavam-bahoaka Longin kosa anefa fa tsy amapahafirin’ny asa nataon’ny Filoha RAVALOMANANA tao amin’ny distrika niaviany io notokanana io. Ny fanampiana ny famatsiana rano efa ao an-toerana raha teo dia asa afaka ataon’ny fokontany raha ara-dalàna ny fitondrana araka ny fanazavana nentin’i Fanantera Longin hatrany. Tsy mendrika ihany koa ny toetran’i Reboza Julien araka ny fampitam-baovao hatrany satria tamin’ny fotoana tsy naha-tany an-toerana ny solombavam-bahoaka no nanaovany vava mikasika ity farany. Nomarihin’i Longin anefa fa tsy fomban-tany any Androy izany satria raha tena lehilahy dia sahy miatrika ny mpifanandrina aminy fa tsy manao « resaka miamboho ». Namafisin’ity sol ombavam-bahoaka avy any Beloha Androy ity moa fa vonona hanolotra omby telopolo ny tenany hanaovana ny fampihavanana ny Filoha RAVALOMANANA sy i Rajoelina raha toa ka miaiky ity farany fa tena diso amin’ny tany sy ny firenena tamin’ny fanonganam-panjakana nataony.